Ike nuklia, owuwu na ikpo oku, nchekwa mmiri - KAIQUAN
XBD Series Vetikal Long Axis Firefighting mgbapụta
XBD Series Ugboro abụọ mmiri Firefighting mgbapụta
Ngosipụta KZJ Series
KQSN Series abụọ-mmiri nfuli
Shanghai Kaiquan mgbapụta (Group) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kasị ibu ọkachamara mgbapụta emeputa, pụrụ iche na-eme nnyocha & emebe, mmepụta & ahịa nke elu àgwà nfuli, mmiri na usoro & mgbapụta akara usoro. Ọ na-eduga ụlọ ọrụ mgbapụta na China. Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ karịrị 5000, gụnyere ihe karịrị 80% nke ndị ji akara ugo mahadum, ihe karịrị ndị injinia 750, injinia ndị okenye na ndị dọkịta. Otu KAIQUAN nwere ogige ntụrụndụ 5 Na Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning na Anhui na ngụkọta mpaghara mita 7,000,000.
(Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. bụ onye ọkachamara kachasị ọkachamara na Motors submersible na nfuli eletrik nke mba China).
Shijiazhuang Kaiquan slurry mgbapụta Co., Ltd. e guzobere na 2005 na ngụkọta ego nke 20 nde USD, ekpuchi ngụkọta nke ebe nke 47,000 square mita & ụlọ ebe gburugburu 22,000 square mita. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ndị ọkachamara 250, ndị ọkachamara njinia injinia na ndị ọrụ nwere nka. E nwere ụwa dị elu resin mmepụta akara na-aga n'ihu ájá igwekota. All nkedo ịmụta phenol ájá ịkpụzi na o nwere 2-ton & 1-ton ọkara ugboro ọkụ nke nwere ike igba 8-ton otu alloy iberibe. Na mgbakwunye, o nwere ihe karịrị ngwa 300 nke akụrụngwa dị elu.
Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd. bụ onye enyemaka zuru oke nke KAIQUAN Group nke na-ekpuchi mkpokọta 34,000 square mita & ụlọ mpaghara nke 12,000 square mita. Ọ bụ ndị ọrụ 630 ugbu a nke gụnyere ndị injinia 63 dị elu. Enwere igwe 200 dị elu dịka igwe akụrụngwa NC, akụrụngwa igwe buru ibu, igwe na-agbazi ọsọ ọsọ, nyocha anaghị emebi emebi akụrụngwa akụrụngwa.
E hiwere Zhejiang Kaiquan Industrial Park na Septemba 1968 ma degharịrị aha ya dị ka Zhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ltd. na Mee 1994. Ọ na-ekpuchi ngụkọta nke 50,000 square mita & ụlọ ebe 23,678 square mita na Zhejiang. Ugbu a, ọ nwere ndị ọrụ 490 na usoro 213 nke nhazi & ule na ikike ikike kwa afọ nke ihe karịrị 100,000 setịpụrụ na uru mmepụta kwa afọ nke 35 nde USD.
Na Mee 9, 2018, Maazị Tang yurong, Svenska kullager-fabriken otu onye isi osote onye isi ala na Onye isi oche nke SKF Asia, yana Maazị Wang wei, Onye isi oche nke SKF China ...
Branabata ụwa, Kaiquan enweela ọganiihu ọhụụ na ahịa mba ofesi
On July 3, 2019, atọ 40-ụkwụ containers e ọma zigara si Shanghai n'isi ụlọ ọrụ nke kaiquan otu ho chi minh n'ọdụ ụgbọ mmiri, Vietnam, na-akanye a ọhụrụ isi itunanya na esenidụt ahịa nke kaiquan grou ...
N'oge na-adịbeghị, guangxi obodo mmiri na-enye ụlọ ọrụ mgbapụta ebe nchekwa nchekwa teknụzụ mgbanwe teknụzụ mgbanwe nzukọ ọchịchị meghere, nzukọ ahụ na-elekọta guangxi obodo mmiri na dra ...